Hevitra 8 momba ny varotra ny orinasanao amin'ny Instagram | Martech Zone
Indraindray aho dia nahita teny nindramina na torohevitra fohy izay tiako zaraina amin'ny fiaraha-monina. Raha tokony handefa tweet fotsiny aho dia hanokatra ny Depositphotos fampiharana finday ary mahita sary tsara tarehy. Manangona azy amin'ny alàlan'ny iPhone-ko aho ary avy eo sokafako ao amin'ny Over App. Ao anatin'ny 10 minitra dia manana sary mahafinaritra aho izay mety hanome aingam-panahy ny sasany tamba-jotra Instagram an'ny orinasanay. Ity misy ohatra iray:
Inona no ifandraisan'izany amin'ny famokarana varotra ho an'ny orinasako? Hitako nandritra ny taona maro fa ny fahafaha-manao lehibe indrindra sy ny mpanjifa dia avy amin'ny tambajotranay fa tsy amin'ny fampiroboroboana ny banga avy ao aminy.
Instagram dia tambajotra sosialy hita maso izay manome fitaovana tsara hanokafana ny fiainako manokana sy hizarako azy amin'ny Internet. Napetrako daholo ny karazana sary rehetra - manomboka amin'ny biraonay ka hatrany amin'ny mpanjifanay, hatramin'ny alikako… ary eny… teny nalaina avy eo manaitra aingam-panahy. Tsy manana mpanaraka be dia be izahay, fa manana vondrona namana be dia be izay tia sy mizara izay avoakanay.
miarakaHootsuite, azontsika atao ihany koa ny mandamina ny lahatsoratray Instagram ho an'ny mpihaino! Ny fandaminana ny fanavaozana ny Instagram dia nandaitra indrindra tamin'ny fandrafetana ny fampiroboroboana ho an'ny mpanjifanay.
Ahoana ny fomba hivarotana ny orinasanao amin'ny Instagram
Ny hazo sosialy atambatra ity sary fohy ity mba hanampiana anao hieritreritra hevitra momba ny sary sy horonan-tsary azonao zaraina hampitomboana ny fahatsiarovan-tena amin'ny marikao sy hananganana fifandraisana ara-tsosialy miaraka amin'ny mpihaino anao. Manome hevitra sary valo azonao araraotina hivarotana ny orinasanao amin'ny Instagram izy ireo:
Asehoy ny vokatrao (na ny mpanjifanao!)
Asehoy ny fomba fanamboarana ny vokatrao na fanomezana ny serivisinao.
Mandehana any ambadika
Asehoy hoe afaka mahavita inona ny vokatrao na ny serivisinao
Asehoy ny birao sy ny mpiasanao
Mizarà hetsika hitanao
Mizarà teny nalaina sy aingam-panahy
Mampiasà fifaninanana hahazoana mpanaraka vaovao
Mazava ho azy, eny an-dàlana dia azonao atao aza ny mandroaka fiovam-po sasany Bokotra Hividianana Instagram!
Tags: sary hevitraaingam-panahyInstagraminstagram marketinghoronan-tsary instagram